"1 Haleloia. Miderà an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Miderà Azy eo amin’ny habakabaky ny heriny. 2 Miderà Azy noho ny asany lehibe; Miderà Azy araka ny haben’ny voninahiny. 3 Miderà Azy amin’ny fitsofana ny anjomara; Miderà Azy amin’ny valiha sy ny lokanga. 4 Miderà Azy amin’ny ampongatapaka sy ny dihy; Miderà Azy amin’ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. 5 Miderà Azy amin’ny kipantsona maneno; Miderà Azy amin’ny kipantsona tsara feo. 6 Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia." Salamo 150
Toerana hideràna an’Andriamanitra (1). Eo amin’ny fitoerany masina, tsy aiza io fa ao amin’ny fitoerana misy an’Andriamanitra na koa ny tempolin’Andriamanitra. Ny tempolin’Andria-manitra koa anefa araka ny 1 Korintianina 3:17 dia tsy dia tena hoe ilay trano hivavahana ihany fa isika zanak’Andriamanitra, ao indrindra ny fitoeran’Andriamanitra. Noho izany, na aiza na aiza no misy ny zanak’Andriamanitra dia azony hatao tsara ny manandratra fideràna ho an’ny Rainy.
Nahoana no midera an’Andriamanitra? (2). Tena betsaka ny antony azontsika hideràna an’Andriamanitra. Ny fahitantsika ny voahariny dia efa antony lehibe hideràna Azy. Anisan’izany isika olombelona izay voahary tena hafa indrindra satria noforoniny tahaka Azy. Manaraka izany ireo voahary natao hanjakàn’ny olombelona dia ny zava-maniry sy ny biby. Ny fomba fiasan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika isan’andro ihany koa. Asa lehiben’Andriamanitra avokoa ireo rehetra ireo (2) ary maneho ny voninahiny. Aoka tsy hiteny isika hoe toa tsy mahita zavatra ho lazaina mikasika izany fideràna izany aho.
Ahoana ny fomba hideràna Azy? (3-5). Fitaovana maromaro no tanisain’ny mpanoratra eto hanaovana fideràna : anjomara, valiha, lokanga… misy izy ireo no efa tsy dia fampiasa firy intsony ankehitriny fa misy koa anefa ireo karazany vaovao taty aoriana izay tena azo ampiasaina amin’ny fideràna mihitsy. Fa fomba iray fanandratana fideràna ihany koa araka ny hita eto dia ny dihy. Endrika maro no azo hideràna Azy fa ny fideràna ankasitrahany indrindra dia ny fideràna amin’ny fo tsotra, tsy amboamboarina, mifantoka tanteraka ao amin’Andriamanitra, amin’ny fahamendrehana, amin’ny fahamaontinana.
Fanontaniana: Manana fiainam-piderana ve ianao?
Fampidirana ny Epistily faharoa ho an'ny Tesalonianina
Ny epistily faharoa, tahaka ilay voalohany koa, dia nosoratan’i Paoly ho an’ny Tesalonianina. Iombonany amin’i Silasy sy i Timoty ary ireo mpiara-dia taminy izany. Nahatonga fialonana tao amin’ireo jiosy sasany ny fahombiazan’ny fitoriana natao tao Tesalonika izay nahitana fiovam-po maro (lehilahy matahotra an’Andriamanitra sy vehivavy manan-kaja). Fanenjehana no nokotrehin’izy ireo (Asan’ny Apostoly 17:1-15). Teo anatrehan’izany dia voatery nandao an-kamehana ireo vao nanolo-tena ry Paoly sy ny namany, tsy nisy olona tena hoe hiandraikitra azy ireo (1 Tesalonianina 2:17-3. 5). I Paoly kosa anefa, maniry indrindra hahita izany fiangonana izany hitombo amin’ny finoana ka nandefa an’i Timoty mba hampiorina tsara ireo vahoakan’Andriamanitra tao. Nandefasany taratasy izy taty aoriana mikasika indrindra ny fiverenan’i Jesosy sy ny fiafaran’izao tontolo izao. Nitombo tokoa ny fiangonana (2 Tesalonianina 1:3), tsy nijanona kosa anefa ny tsindry sy ny fanenjehana. Nisy koa anefa ny dika vilana natao tamin’ny taratasin’i Paoly ka nisy ireo olona sasany izay nanome vahana ny hakamoana fa hoe efa ho avy ny Tompo ka tsy misy liana izay miasa izany intsony.
Izay no nahatonga an’i Paoly hanoratra indray mba hampahery ny kristianina niharam-panenjehana (2 Tesalonianina 1:3-12), hanome fanazavana momba ireo fiheveran-diso mikasika ny fiavian’i Jesosy indray ( 2 Tesalonianina 2:1-5), hanitsy ireo kristianina tsy mitoetra tsara izay manome vahana ny hakamoana (2 Tesalonianina 3:6-15).
Handray fampaherezana anie isika eo am-pamakiana izao taratasy izao ka handre ny Tompo miteny mivantana amintsika koa.